SADC Archives - NewZimbabwe.com SADC Archives - NewZimbabwe.com
All posts tagged: SADC
WINDHOEK – Namibian President Hage Geingob, who is hosting a summit of southern African leaders, on Saturday strongly rejected criticism of Africa by the West saying there was undue pressure on the continent. “People have an attitude about Africa,” Geingob said in an interview with the French radio network RFI. “Things that they want Africans
By Staff Reporter PRESIDENT-elect Emmerson Mnangagwa, whose electoral victory is being challenged in Zimbabwean courts, on Friday told his SADC peers he was elected cleanly in an election in which all his challengers were allowed to campaign freely. He was speaking in his maiden speech address to Head of States and Government at the 38th
Chamisa gives ZEC Friday ultimatum to attend to opposition grievances
By Staff Reporter MDC Alliance leader Nelson Chamisa Tuesday gave the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) up to this Friday to give in to the opposition’s demands for poll reforms or they will escalate their grievances to SADC and AU. At a media briefing at the Morgan Richard Tsvangirai House, Chamisa also said his party may
Chamisa wants AU, SADC to take over the running of Zim elections
By Chris Mahove MDC Alliance presidential candidate, Nelson Chamisa says the African Union and SADC should step in and run Zimbabwe’s looming elections insisting the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) was not capable of delivering a credible election. Chamisa, who poses the biggest threat to President Emmerson Mnangagwa’s continued rule, was addressing a press conference at